४४ लाख तिरेर कमाउन पठाएकी छोरीको जव ‘म’र्दैछु’ भनेर म्यासेज आयो ! – Yuwa Aawaj
पुष २६, २०७७ आइतबार 416
Prevनयाँ भाइर’सको सङ्क्र’मितमा देखिन यस्ता छ्न लक्षणहरु…सक्दो सेयर गर्नुहोस् ।
Nextबेलायतमा गोर्खा आन्दो’लनमा सक्रिय पूर्व गोर्खाको कोभिडले नि’धन !
गृहमन्त्रीलाई भेटेर पाकिस्तानी राजदुतले भने – नेपाली क्रिकेटलाई टेस्ट राष्ट्र बनाउन ठुलो सहयोग गर्नेछौ ।
खुशीको खबर ! आज देखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले पनि खोप लगाउन पाउने ।